मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा २४% ले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचक कस्तो ? – Insurance Khabar
मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको नाफा २४% ले बढ्यो, अन्य वित्तीय सूचक कस्तो ?
प्रकाशित मिति : १२ माघ २०७६, आईतवार ११:०२
काठमाडौं । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा ८ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २४ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा बैंकले ६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो ।
पुस मसान्तसम्ममा बैंकको चुक्ता पूँजी ५८ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको जगेडा कोष १६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । वितरण योग्य मुनाफा ३ करोड ८६ लाख २ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी १३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले ५८ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खुद व्याज आम्दानी गरेको थियो । त्यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा २ करोड ३७ लाख ४ हजार रुपैयाँ बढेर ११ करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
समिक्षा अवधिमा बैंकले ४ अर्ब ९४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन गरी ४ अर्ब २४ करोड २७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बैंकको निक्षेप संकलन २३ प्रतिशतले बढेको हो भने कर्जा लगानी २१ प्रतिशतले बढेको हो ।
बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी २८ रुपैयाँ ५५ पैसा कायम भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकको प्रति शेयर आम्दानी १ रुपैयाँ ७९ पैसा बथियो । बैंकको प्रतिशेयर नेटवर्थ १५८ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको छ भने मूल्य आम्दानी अनुपात १०.१२ गुणा रहेको छ ।